गरिव मान्छे करोडपति हुँदा खुशीले झन्डै सासै रोकिएन ! – Jagaran Nepal
गरिव मान्छे करोडपति हुँदा खुशीले झन्डै सासै रोकिएन !
एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंले आफ्नो बैंक खातामा कति पैसा होला भनेर चेक गर्नुभयो। कहिल्यै १०–१५ हजारभन्दा बढी ब्यालेन्स नहुने तपाईंको खातामा तीन अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भएको थाहा पाउनुभयो भने के हुन्छ ? निःसन्देह यो चमत्कारले तपाईंलाई स्तब्ध बनाउनेछ।
यस्तै भयो, अमेरिकाको टेक्सास राज्यनिवासी रुथ बलुनको हालत पनि। उनी केही घण्टाका लागि करोडपति बनिन्।गएको डिसेम्बर १० मा डालासकी बासिन्दा रुथ अफिसमा दिउँसोको ‘सिफ्ट’मा काम गरिरहेकी थिइन्। अनायास उनले आफ्नो बैंक खाता चेक गरिन्। उनको हर्ष र आश्चर्यको सीमा रहेन। किनभने, खातामा थियो ३ करोड ७० लाख डलर।
‘खुशीले मेरो सासै रोकिएलाजस्तो भएको थियो,’ उनले भनिन्। घर पुगेर उनले श्रीमान्लाई बताइन्। उनी पनि झण्डै बेहोश भएका थिए। त्यसपछि उनीहरूले लिगेसी टेक्सास बैंकमा सम्पर्क गरे। बैंकका कर्मचारीले उनीहरूसँग क्षमा मागे र गल्तीले रुथको खातामा पैसा गएको
बताए।मलाई त कसैले ३७ मिलियन डलर उपहार दिएको जस्तो लागेको थियो,’ रुथले भनिन्, ‘बैंकले गल्तीका कारण त्यत्रो रकम मेरो खातामा हालिदिएको रहेछ।’ साँझतिर बैंकले आफ्नो गल्ती सुधार्‍यो र रुथको खाता फेरि उस्तै भयो।
केही घण्टाका लागि करोडपति भएकी रुथले त्यतिञ्जेल अनेक सपनाका तानाबाना बुनिसकेकी थिइन्। ‘मैले केही रकम चन्दा दिने र बाँकी जग्गाजमिन कारोबारमा लगाउने योजना बनाएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, त्यो दिवास्वप्न थियो, जो टुट्यो।’ क्रिसमसको उपहार पाउने बेलामा रुथले केही घण्टाका लागि बैंकको विशाल उपहार पाइन् तर त्यसपछि ठण्डाराम !